NextMapping | NextMapping ™ mpanazatra
NextMapping ™ mpanazatra
Matoky tena ve ianao amin'ny ho avy? Faly anao ve ny mety ho anao sy ny orinasanao amin'ny ho avy? Manana ny paikady sy fitaovana ve ny orinasanao hitarika fanovana?
Ny mpanazatra sy mpanolotsaina NextMapping ™ dia hanolotra anao ny drafitra, fanohanana sy fitarihana mba hamoronana ny hoavinao tsara indrindra. Ny olona mahomby rehetra dia mampiasa mpanazatra mpandraharaha na mpanazatra mpitarika amin'ny endrika mpampianatra / mpanazatra / mpitari-dalana.
Ny mpanazatra momba ny orinasa voamarina NextMapping ™ dia hiara-hiasa aminao hanangana paikady, hanome aingam-panahy ny hoavin'ny fiadanan'asa ary hanampy anao hampivelatra ny fahaiza-manao ilaina ho anao hiroborobo sy hivoatra amin'ny fotoana haingana sy haingana ny fanovana haingana.
Hihaona amin'ireo mpanazatray NextMapping ™
Fantatra ho toy ny # 1 Hoavin'ny asa mpamorona an'i Onalytica, ary mpanoratra boky 9 anisan'izany ny andiany faharoa amin'ny “NextMapping ™ - Aniticape, Navigate ary Mamorona ny ho avin'ny asa”Miaraka amin'ny mpiara-miasa soratana sy asiana marika. Lohateny boky hafa dia misy ny “Ny zavakanton'ny fanovana - Fiovana fiovana anaty tontolo misy haingam-pandeha"(Wiley 2015),"Ny fomba 101 hanaovana famokarana X, Y sy Zoomers faly any am-piasana”(2010) sy boky 4 hafa momba ny fahaiza-mitarika farany ilaina ilaina ho amin'ny ho avy amin'ny fiomanana amin'ny asa.
Ny hoavin'i Cheryl ho avy amin'ny asa ho mpitarika dia naseho tamin'ny famoahana toa ny Huff Post, Forbes, IABC Magazine, Law Magazine, Metro New York, Magazine Entrepreneur, Readers Digest, CBS Online, NBC Online, Fox Online ary maro hafa. Nandritra ny roapolo taona dia nanangana laza i Cheryl tamin'ny famoahana lanja miavaka amin'ny mpanjifa izay ao anatin'izany ny AT&T, Bell Mobility, Omnitel, Gartner, British Telcomm, Manulife, ary koa orinasa sy mpandraharaha antonony amin'ny indostria izay misy ny teknolojia, ny fahasalamana, ny fambolena, fitantanam-bola, fiantohana ary maro hafa.
Mifandraisa aminay ankehitriny!
Crystal Metz dia mpandraharaha mahomby sy mpitarika ekipa. Faly izahay fa manana Crystal satria ny mpandraharaha nifantoka tamin'ny mpanazatra NextMapping ™.
Amin'ny maha-mpanazatra an'ny NextMapping ™ anao, i Crystal dia mitondra fiara, hafanam-po ary firaketana an-tsokosoko hanampiana ny mpanjifany hamorona fahombiazana bebe kokoa, famerana sakana amin'ny fahombiazana ary hamorona paikady vaovao hamoronana izay ho avy.
Tompon'ny Insurance Crystal Metz, orinasa iray fiantohana # 1 izy. Hatramin'ny nanombohana ny fiantohana Crystal Metz dia naharesy ny mpifaninana taminy ary teo ambany fitarihan'i Crystal dia nitombo hatrany na dia teo amin'ny sehatry ny indostria miova haingana aza isan-taona. Crystal dia manasongadina ny fahombiazany amin'ny maha-mpandraharaha teraka azy sy nitaizana tamina fianakaviana fambolena. Tamin'ny fahatanorany dia nianatra ny fahaiza-mitantana, ny asa mafy sy ny fikirizana izy ary ny filan'ny orinasa.
Mpandraharaha iray hatramin'ny fahazazany, 20 taona teo ho eo dia nanokatra ny orinasany trano, CENTURY 21 Medellis Realty. Ity fitsangatsanganana ity dia nanery an'i Crystal hianatra haingana dia haingana, mampifanaraka amin'ny fitarihana ekipa iray nefa mahatakatra ny lafiny manan-danja amin'ny orinasa. Tao anatin'izay 5 taona nitantanany sy nikirakirany ny mari-pananany trano, ny fitomboany sy ny fahalalany izay tokony hatao sy izay tsy tokony hatao dia lesona nianarana ary tsy hadino velively. Crystal dia nanova ny fifantohany amin'ny orinasa amin'ny fiantohana ary nanokatra fiantohana Crystal Metz. Nomeny ny ekipany ny fahombiazany - nanangana ny orinasany tamin'ny alàlan'ny fitadiavana olona sahaza sy fizarana mpitarika izy. Ny tsy fivadihan'ny ekipany sy ny firotsahany dia iray amin'ireo zava-bita reharehany amin'ny maha mpandraharaha azy. Ny fomba fitarihan'i Crystal dia ny mitazona fanantenana sy fenitra avo lenta rehefa mampianatra sy mitarika ny ekipany amin'ny kolontsain'ny mpitarika iraisana.
Amin'ny maha-mpamily an'ny NextMapping ™ an'i Crystal ny fahombiazana ary ny fifantohany amin'ireo olona no fanomezana lehibe indrindra ananany. Manambatra ny olona handinika izay mampifaly azy ireo izy amin'ny maha-mpandraharaha sy amin'ny maha-olona azy ary avy eo manome aingam-panahy sy paikady hanampy anao amin'ny fanatanterahana izany.
Ny firehetam-pony dia ny fanampiana ny olona hanorina sy hanamafy orina ny fahaizany, hahazo fahatokisana, manampy azy ireo hitombo ary hahavita ny tsy azo atao.
Crystal dia manampy ireo mpandraharaha amin'ny fikarohana momba ny tsena, orinasa, vahaolana amin'ny ekipa ary ny drafitra stratejika. Amin'ny maha-mpanazatra Crystal NextMapping ™ anao dia hanampy ny firenen'ny orinasa hampitombo amin'ny ambaratonga izay tsy noeritreretinao mihitsy. Mitondra tombony lehibe izy amin'ny maha-mpandraharaha mpandraharaha izay mandeha amin'ny dia ary manana firaketana fahombiazana voaporofo.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny mpiara-miasa amin'ny mpandraharaha miaraka amin'i Crystal ianao, mandehana eto: https://nextmapping.com/nextmapping-coaches/entrepreneur-coaching/
Amin'ny maha-mpampianatra mpiahy NextMapping ™ dia manana fivoarana lehibe amin'ny maha mpitarika zokiolona azy amin'ny orinasa mihoatra ny 25 taona.
Ny foto-keviny dia misy asa be vidy ao amin'ny indostrian'ny banky, mamolavola paikady e-varotra ho an'ny roa amin'ny fivarotana lehibe (Canada Buy and Future Shop) any Kanada ary ho mpandraharaha sy mpiara-miasa amin'ny orinasa telo mahomby.
Reg dia manana traikefa lehibe momba ny raharaham-barotra sy consulting, anisan'izany ny famolavolana sy fampandrosoana, ny famakafakana sy ny fitantanana, ny fitantanana sy ny fampandrosoana ny ekipa ary ny paikady sy ny fanatanterahana e-varotra mahomby.
Ny fanabeazana an'i Reg dia misy ny mari-pahaizana Master of Arts amin'ny fanadihadiana sy fitantanana ny fifanolanana avy amin'ny Royal Roads University.
Izy dia manolo-tena hanampy amin'ny fanavaozana ny fampandrosoana sy ny fitomboan'ny orinasa sy ny mpiasa amin'ny ambaratonga rehetra amin'ny alàlan'ny fanomezana vahaolana mavitrika sy famoronana izay tsy vitan'ny fanahy sy ny fitomboana ihany koa fa mamela ny orinasa hahita, hamaha ary hamaha ny tanjaky ny tsirairay avy aminy. mpiasa.
Ny fitiavan'ny Reg dia ny manampy ny mpitondra hampitombo ny fifamatoran'ny ekipa ary koa ny fanampiana ny mpitondra ambaratonga ambony hiakatra amin'ny toerana mpanatanteraka.
Ny mpitarika sy ny mpikambana ao amin'ny ekipa izay nanatevin-dahatra hatrany i Reg dia manome kontekso sy fahalalana ary fitaovana sarobidy izy ireo hanampiana azy ireo hahomby amin'ny toeram-piasana.
Ny fomba fanaon'i Reg amin'ny maha mpanazatra an'ny NextMapping ™ dia mivantana, manadihady ary stratejika miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fanampiana ny olona hahomby.
Ashley Farren dia mpanazatra sy mpanolo-tsaina NextMapping ™ voamarina. Faly izahay fa manana ny ekipa NextMapping ™.
Ashley dia mahalala tsara, stratejika ary miara-miasa. Manana tantaram-pahombiazana lehibe izy amin'ny tetik'ady stratejika ho an'ny orinasa manerantany.
Ny tantaran'ny asany dia misy ny 12 taona any Singapore amin'ny stratejia HR Business Partner miasa amin'ny orinasa Multinational manerana ny indostria samihafa anisan'izany ny Hi Tech, FMCG, Fitrandrahana.
Nandritra ny 6 taona dia niasa tao amin'ny Autodesk i Ashley, nitarika stratejika ny asan'ny HR ho an'ny asan'ny Global Engineering, anisan'izany ny tranokala lehibe roa any Singapour sy Shanghai (mpiasa 1200) sy ekipa any Etazonia sy Eropa.
Talohan'izay, nandany taona 12 tany amin'ny Unilever miasa any Azia, Afrika, Afovoany Atsinanana manohana ny asa aman-draharaha marobe (ao anatin'izany ny IT (Infrastructure and Business system) / ny mpanjifa / ny varotra, ny varotra ary ny maha mpitantana ny fianarana sy fampandrosoana.
Nandritra io fotoana io dia nanohana ny Infrastructure Organisation eo amin'ny faritra isam-paritra amin'ny fananganana serivisy serivisy manerantany izy, ary mitantana ny fampiharana manerana an'i Afrika sy Moyen Orient, ary koa mitantana ny tetik'asa ivelany be loatra.
Nandritra ny vanim-potoanan'ny orinasa 22 tamin'ny taonany, nanamora ny fanovana fandaminana lehibe sy nitantana fandaharam-pandraharahana i Ashley nandritra ny taona. Nandray an-tanana ny tetik'asa sy ny fandaharan'asa fitantanana fanovàna izy, ny fizotran'ireo talenta sy ny fitantanana ny fampisehoana, nanatanteraka ny fahasamihafana sy ny fampidirana an-tsehatra nanatevin-daharana ny mpitarika ambony sy ny mpitantana, ny programa fampidirana mpiasa, nanamora ny fananganana ny HR.
Hélène Hamilton dia mpanazatra voamarina ao amin'ny ICF ary mitondra traikefa isan-karazany ary paikady mahomby amin'ny client amin'ny ekipa NextMapping ™.
Ny fiaviany dia ahitana ny traikefa nandritra ny 30 nandritra ny taona maro, anisan'izany ny 15 taona amin'ny maha mpanatanteraka zokiolona azy. Hélène dia mitondra fahaiza-manao amin'ny fampandrosoana ny fandaminana sy ny Human Resources. Ankasitrahan'ny mpanjifany ny fahafahany manampy azy ireo amin'ny famoronana famoronana ao anaty tontolo mihamitombo.
Izy no mpamorona ny "The Secret Kept Secret to Enforing Staff" (2017) ary voamarina ao amin'ny Nova ™ Profile sy ireo fitaovana hafa an'ny mpitarika.
Ny indostrian'ny asany dia misy ny fitsaboana, sehatra ho an'ny daholobe, fanabeazana ary orinasa madinika.
Ny atrikasa sy ny mpanjifa an'i Hélène dia mankasitraka ny fahafahany mahazo haingana ny toe-javatra, ny fomba fisainany stratejika ary ny fomba fanao mifanaraka amin'ny fanampiana ny mpitarika sy ny mpikambana ao amin'ny ekipa ho vonona amin'ny tanjaka ho avy izao.
Vonona ny hifandray aminay ary hiara-miasa amin'ireo mpanazatra sy mpanolo-tsaina an'ny NextMapping ™?
Nofonosinay ianao - tohizo fa tianay ny hifandray aminao.
Ny ho avin'ny fampianarana an-tserasera